‘Ahoana no Inoantsika Hoe Tsy Anjarantsika Rahampitso?’: Fahafahambaràka Amin’ny Fitorahana Ilay Tovovavy Afghana 19 Taona‘ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2015 16:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Română , Magyar, عربي, Italiano, Français, English
Dikasary avy tamin'ny lahatsarin'ny RFE/RL mampiseho tovovavy kely toraham-bato mandra-pahafatiny
Fampitandremana: Misy sary mahatohina ito lahatsoratra ito
Ny faran'ny volana Oktobra, notorahana ka maty mihitsy ilay tovovavy Afghana 19 taona tany Firozkoh, renivohitry ny faritanin'i Ghor, taorian'ny niampangana azy ho nanitsakitsaka tokantrano. Misy lahatsary fohy, azon'ny Radio Free Europe, mampiseho ilay tovovavy fantatra ho i Rokhshana, nototorana tany hatreny amin'ny tendany ary mikiakiaka raha mitora-bato azy kosa ireo lehilahy amin'ny hirany manao hoe “Tsy misy Andriamanitra afatsy Allah.” (Lahatsary tena mampikorotan-tsaina)
“Noterena hanambady lehilahy antitra iray tsy araka ny sitrapony i Rokhshana, ary notoraham-bato izy taorian'ny nahatratrarana azy niara-nipetraka an-tsokosoko taminà lehilahy iray hafa tany amin'ny faritanin'i Ghor,” araka ny nambaran'ny lehiben'ny polisin'ny faritanin'i Ghor, Jeneraly Mustafa, tao amin'ny Tolo News, taorian'ny fitoraham-bato ny 25 Oktobra..
Nilaza ny Governoran'ny faritany, Seema Joyenda — iray amin'ireo roa hany vehivavy governora any Afghanistana — fa noteren'ny fianakavian'i Rokhshana izy na tsy araka ny sitrapony aza..
“Nosaziana tamin'ny sazy maivana tokoa ilay lehilahy niara-nipetraka an-tsokosoko taminy ary nivoaka tsy nisy naratra,” hoy izy. “Tsy voalohany amin'ny zava-nitranga ratsy tao amin'io faritra io izao ary tsy ho farany ihany koa.”
Mampahatsiahy ilay ohabolana tranainy amin-dry zareo Afghana manao hoe “Natao ho an'ny lehilahy na ny fasana ny vehivavy” ny nitorahana vato an'i Rokhshana, 19 taona, mandra-pahafatiny
Mohammad Zaman Azimi,tomponandraiki-panjakana iray eo an-toerana, nanameloka ny Taliban, izay mifehy ilay tanàna nisehoan'ilay tora-bato, noho io tranga io.
Gazety an-tsoratra iray eo an-toerana antsoina hoe 8am, nilaza fa avy taminà mpitondra fivavahana iray, Mullah Yosuf, ilay didy fitoraham-bato an'i Rokhshana, io mpitondra fivavahana io izay nangataka azy imbetsaka hanambady ny rahalahiny na nandà hatrany aza izy.
Abdul Hai Khatibi, mpitondra tenin'ny governoran'ny faritany, nilaza fa ilay fandàvan'i Rokhshana ny rahalahin'i Yosuf no antony mivantan'ilay fitoraham-bato.
Araka ny fikarohana natambatry ny 8am, tovovavy tsara tarehy i Rokhshana ary nianatra hatreo amin'ny taona fahaenina monja. Faharoa nitsoahany tao an-trano io noho ny fanerena azy hanaiky vady amboarina.
Ny voalohany, nitsoaka niaraka tamin'ny lehilahy tiany izy, i Muhammad Nabi, volana vitsy taorian'ny naneren'ny fianakaviany azy hanambady lehilahy iray manan-karena eo an-toerana.
Kanefa, tsy nanan-tsafidy afatsy ny niverina tany an-tanàna izy ireo taorian'ny nandrahonan'ny fianakaviam-badiny ny fianakavian'i Nabi ary nanao azy ireo ho takalon'aina. Fony izy niverina, tsy nieritreritra ny hanambady azy intsony ilay vadiny ary nanambady ny rahavavin'i Nabi indray teo amin'ny toerany.
Na izany aza anefa, nandràra an'i Rokhshana sy Nabi tsy hivady ireo zokiolona teo an-toerana.
Nitohy ny fotoana maizin'i Rokhshana. Nanome vola be ho an-drainy mba ho afaka hanambady azy ny lehilahy iray antitra 55 taona. Na nandà aza izy ary nampitandrina ny rainy fa handeha hitsoaka indray, nanaiky ny tolotra ilay rainy.
Nataony tokoa ilay fandrahonany, tamin'ity indray mitoraka ity nitsoaka niaraka tamin'i Gul Mohammad, zanaka lahin'ny lehilahy manam-pahefana teo amin'ny tanàna izy. Fony notorahana ho faty i Rokhshana, nosaziana hahazo kapoka karavasy in-100 monja i Mr. Gul ary naverina tany an-trano.
Nilaza ilay fitoraham-bato ho tsy foto-pisainana Silamo sy helohan'ny lalàna ny Filoha Ashraf Ghani, ary nandidy ny hisian'ny fanadihadiana lalina momba ilay zava-nitranga.
Fanambaran'ny filoha mampanao fanadihadiana momba ilay fitorahambato
Nanameloka ilay zava-doza nitranga ihany koa ireo parlemantera. Nilaza izao i Fawzia Koofi, mpisolotena avy tamin'ny Badakhshan, izay nanandrana nihazakazaka ny ho filoha, indrisy tsy lany, ny taona 2014: “Hatramin'ny niantombohan'ny governemanta vaovao, io no heloka bevava faharoa ratsy indrindra tamin'ny tantaran'ny olombelona.” Ny voalohandohan'ny volana Martsa, tovovavy iray — Farkhunda — nodarohana ho faty ary nodorana avy eo, nataon'ireo vahoaka feno hatezerana tany Kaboul — taorian'ny fiampangàna diso hoe nandoro ny Korano izy.
Rehefa mahita ny lahatsary fitoraham-bato an'i #Rokhshana ianao, mankahala tena amin'ny maha lehilahy anao ianao, mankahala tena amin'ny maha olona anao ianao
Nitondra taminà onjanà tsikera tao amin'ireo media sosialy ilay lahatsary maharitra roa minitra — izay mety hoe nalain'ny vavolombelona nanatri-maso tamin'ny findainy.
Nahatonga fankahalàna ireo mpanao politika tsy nihetsika tamin'ilay raharaha sy ireo mpitondra fivavahana mahery fihetsika ilay zava-nitranga.
Mpampiasa Facebook iray naneho hevitra teo ambanin'ilay lahatsary izay nanameloahn'ireo parliemantera ilay fitoraham-bato, hoe:
Ianareo mpanao politika tsy misy ilàna azy, miteny fotsiny foana. Henatra ho anareo rehetra.
Nifanandrify tamin'ny fahombiazan'i Maryam Monsef tamin'ny fifidianana parlemantera tany Kanadà ilay vaovao nahatsiravina nitoraham-bato an'i Rukhshana. Ramatoa Monsef, teraka tany Afghan, mpitsoa-ponenana, no Minisitra vaovaon'ny Andrimpanjakana Demokrâtika ao Kanadà, ao amin'ny kabinetran'ny Praminisitra Justin Trudueau ahitàna tanora sy karazan'olona maro.
Nampitaha ny fomba fiainan'ireo vehivavy Afghana roa ireo ny Afghana mpampiasa ny media sosialy mba hanaovana hetsi-panoherana amin'ilay filatsahana vaovaon'ny herisetra mifandray amin'ny maha lehilahy sy maha vehivavy ao anatin'ny vanimpotoana taorian'ny fitondràn'ny Taliban.
Rokhshana (nozarazaraina be)
vehivavy Kaboul nanao hetsi-panoherana manohitra ny nahafatesan'i Rokhshana.
Vehivavy maro mpikatroka mafàna fo, nitsangana mba hitaky ny rariny ho an'i Rokhshana. Ny 6 Novambra, namoaka fanambaràna izy ireo nitakiany ny governemanta mba hanao fanadihadiana matotra, hamantatra ireo nandidy ilay fitoraham-bato.
Maro anefa ny mahita io hetsika io ho tsy misy vokany.
Nahatonga ireo vehivavy Afghana maro hanahy ireo trangan'i Farkhunda sy i Rokhshana raha toa ny fiainan'izy ireo, ankoatry ny fahalalahana, ka ho tsara antoka ao Afghanistana, .
Notoraham-bato tao #Afghanistana ilay tovovavy #Rokhshana. Ahoana no Inoantsika Hoe Tsy Anjarantsika Rahampitso?
Naneho hevitra tamin'io ny mpampiasa Facebook iray:
Ahoana eto an-tany no hisy olona sahy haka vato ka hitoraka izany any amin'ny vehivavy efa ho tototry ny tany? Ahoana no ahafahanao miaina aorian'ny nanaovanao izany?
Tsy misy didy ho an'ny fitoraham-bato ny lalàna Afghana momba ny heloka bevava. Kanefa, ny taona 2013, niezaka ny nanao io ho azo ekena ireo mpitondra fivavahana mahery fihetsika sasany ao amin'ny antenimiera ambany.
Soa fa nanam-bitana ireo vehivavy Afghana, nanery ny Filoha Hamid Karzai handà io tolo-dalàna io ny fanerena maneran-tany, ka nanolo azy io tamin'ny ‘fitazonana mitohy’ ho fanasaziana ny fanitsakitsahana tokantrano.
8 ora izayAzerbaijan